Home Ulo oru Europe Dan-Axel Zagadou Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Dan-Axel Zagadou Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Ebe E Si Nweta: Ihe mgbaru ọsọ na Sortitoutsi
Na-amalite, aha otutu ya bụ “Daxo“. Edemede anyị na-enye gị mkpuchi zuru ezu nke Dan-Axel Zagadou Akụkọ nwata, akụkọ ndụ, Eziokwu ezinụlọ, nne na nna, ndụ mbụ, ụdị ndụ, ndụ onwe onye na ihe omume ndị ọzọ ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Ndụ na ịrị elu nke Dan-Axel Zagadou. Ebe E Si Nweta Foto: Mgbaru ọsọ na BVB.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ nnukwu onye agbachitere nwere oke ịgbagha agbagha na nnabata. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị Dan-Axel Zagadou's Biography nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a na-enweghị nkwado ọzọ, ka anyị jiri nke mbụ anyị na Dan-Axel Zagadou nke Wiki soro anyị Isiokwu nke ọdịnaya tupu akụkọ zuru ezu.
Dan-Axel Zagadou Biography (Wiki Enquiries)
Aha n'uju: Dan-Axel Zagadou
aha otutu: Daxo
Ụbọchị ọmụmụ: 3 Juun nke June 1999 (Afọ 20 ka ọ bụ na Machị 2020)
Ndị nne na nna: Mr na Mrs Zagadou
Ụmụnne: Nwanyi di nma na nwanne (Johan)
elu: 1.96 m (6 ft 5 na)
Ezinụlọ Ezinụlọ: Côte d'Ivoire
-arụ: Onye na-agba ụkwụ (etiti-azụ, N'aka ekpe)
Omume Nke Ndụ: Dị nro, nwere mmetụta ịhụnanya, na-achọ ịmata ihe, enwere ike ịmegharị na ikike ịmụta ngwa ngwa
Ebe o toro: Créteil, France (ebe amụrụ ya)
Agụmakwụkwọ Bọọlụ: US Créteil na PSG
Akụkọ banyere nwata-Dan-Axel Zagadou:
Ihe ndabere ezinụlọ Dan-Axel Zagadou:
Dan-Axel Zagadou Mmụta na Ọrụ Buildup:
Dan-Axel Zagadou Oge mbu nke football:
-Zọ Dan-Axel Zagadou Ga Akụkọ Ama:
Ọnye na-bụ Dan-Axel Zagadou's Nwanyị nwanyị ?:
Ndụ ezinụlọ Dan-Axel Zagadou:
Banyere Dan na Axel Zagadou Nna na nne:
Banyere Dan-Axel Zagadou nwanne:
Banyere Dan-Axel Zagadou:
Ndụ nke Dan-Axel Zagadou:
Ndụ Dan-Axel Zagadou:
Eziokwu Dan-Axel Zagadou:
Eziokwu nke 1 - Banyere ụgwọ ọrụ nke ụgwọ ọnwa ya:
Eziokwu # 3 - FIFA agaghị adị mụ mma:
Eziokwu # 4 - oking Smụ sịga na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ :ụ:
Eziokwu # 5 - igbu egbugbu:
Malite na, Dan-Axel Zagadou Amuru ya na ubochi ato nke June 3 na ngbako Créteil na France. Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ ụmụaka amụrụ nna na nne ya amachaghị.
Nwa Dan-Axel na-eto eto tolitere na Créteil na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ nke Paris, France n'akụkụ ya na ụmụnne ndị naanị anyị maara abụọ n'oge edere. Ha bụ ụmụnne ya ndị okenye Dressy na Yohan.
Hụ ebe Dan-Axel tolitere na maapụ France. Ebe E Si Nweta Foto: WorldAtlas na Mgbaru Ọsọ.
Ing tolite na Créteil Dan-Axel bụ nwata siri ike ma na-egwu egwuregwu nke họọrọ ịzọ ụzọ nwanne ya nwoke nke okenye Dressy site n'ịgba bọọlụ nke bụ egwuregwu kachasị ewu ewu na komputa Créteil.
Mmegide a enweghị nne na nna Dan-Axel bụ ndị bụcha ndị Ivori butere mkpebi siri ike nke ịkwaga France ogologo oge tupu amụọ nwa nwoke a -Dan-Axel.
Dị ka ndị isi nke ọtụtụ ezinụlọ na-akwaga mba ọzọ, ndị mụrụ Dan-Axel nwere olileanya ha dị elu ma nwee nchekwube maka ọdịnihu ezinụlọ maka ọdịmma ha site na ụmụaka ha na-eme egwuregwu na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ.
Onweghị ihe amara banyere ndị nne na nna Dan-Axel n'oge edere akụkọ a. Ebe E Si Nweta Foto: Mgbaru ọsọ na ClipArtStudio.
Dika odi, ha nwere obi uto karie ka Dan-Axel sonye na klọb obodo - US Créteil. Ọ bụ n'ụlọ ọgbakọ dị na mpaghara ahụ ka ọ malitere ịgba bọọlụ asọmpi site na mgbe ọ dị obere site na nkwado ezinụlọ.
US Créteil-Lusitanos nke dị gburugburu ebe ahụ ka Dan-Alex butere nzọụkwụ mbụ ya na ịgba bọl asọmpi. Ebe E Si Nweta Foto: Ihe mgbaru ọsọ na FootballLogos.
Mgbe nwata ahụ nọ ya, ọ lebara agụmakwụkwọ ya anya nke ọma wee hụ na agụmakwụkwọ bara uru na mmepe ya niile. Ka a sịkwa ihe mere Dan-Axel ga-eji nye ọtụtụ ụmụaka ndụmọdụ ka ha gaa n ’ụwa niile ka ha gaa ụlọ akwụkwọ. Dabere na ya, ịga ụlọ akwụkwọ bụ ihe kacha mkpa ịme.
Ọbụna n'oge ahụ, football dịkwa mkpa maka Dan-Axel. Nke a pụtara ìhè n'ụzọ nke mmepe ya dị ebube na ọkwa nke US Créteil mere ka Paris Saint-Germain lelee ya anya dị ka atụmanya.
N'ihi nke a, e wutere Dan-Axel na PSG mgbe ọ dị afọ iri na abụọ. Ọ malitere ịgbago elu site na ọkwa ndị dị na Les Parisiens ruo mgbe ọ ghọrọ onye so n'òtù ndị nchekwa klọb na 12.
Na-ebili n'ime otu ọnọdụ: Foto na-adịghị ahụkebe nke ịkọwa bọọlụ na ndị ntorobịa PSG. Ebe E Si Nweta Foto: Ihe mgbaru ọsọ.
Mgbe ya na ndị ọrụ nchekwa nke PSG, Dan-Axel mere naanị ngosipụta 9 na 2016 - 17 French usoro nke anọ nke ịgba bọọlụ amaara akpọrọ Championnat de France Amateur. Na njedebe nke oge ahụ, ọ bịara doo ya anya na inweta nbibi n'etiti ndị otu egwuregwu mbụ nke PSG ga-abụ ihe siri ike.
Agbanyeghị na ndị otu klọb rụrụ ọrụ na-akpali akpali na-emesi Dan-Axel na ndị egwuregwu ndị ọzọ ọfụma ọfụma ọhụụ, ọ họọrọ ịhapụ nwere olile anya na ọ gaghị akwa ụta na mkpebi ahụ.
Nkwa nke nwatakịrị na - achọ ịkwalite ọkwa mbụ nke PSG kụrụ ya ihe egwu, n'ihi ya mkpebi ya ịhapụ ụlọ French. Ebe E Si Nweta Foto: Ihe mgbaru ọsọ.
Know mara na Dan-Axel anabataghị ọganihu site na Manchester City na RB Leipzig? Kama, ọ họọrọ ibinye aka ya na Borussia Dortmund n'ihi usoro klọb nke inye ndị na-eto eto ohere ịnweta ụdị egwuregwu bọl mbụ.
Ọ bụ ezie na onye na-agbachitere ọgụ ahụ lụrụ ọgụ ntakịrị n'oge mpụta mbụ ya (2017/2018) maka akụkụ German, ọbụbụenyi ya na ndị otu egwuregwu n'oge ahụ. Pierre-Emerick Aubemeyang na Ousmane Dembele n'etiti ihe ndị ọzọ mere ka ọ chọta ụdị na-esote afọ (2018/2019). Ngwa-ngwa n’oge e dere ihe a, Dan-Axel bụ onye ngbachitere isi nye Dortmund ya na ọnụnọ egwu dị egwu ga-ezu iji bulie ndị na-emegide ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Onye na-agbachitere maestro nwere obi ụtọ na Borussia Dortmund ebe ọ bụ nnukwu ihe iyi egwu nke ndị na-emegide ya. Ebe E Si Nweta Foto: Ihe mgbaru ọsọ.
Onye agbachitere ọ bụla toro ogologo ma maa mma dịka Dan-Axel nwere ike ịnọnyere nwunye ma ọ bụ nke kachasị njọ, na-enweghị enyi nwanyị. Ọnọdụ mmekọrịta Dan-Axel n'oge edere na-ekwu na ọ ka lụghị di ma ọ bụrụ na ọ mụtaghị nwa nwoke ma ọ bụ ụmụ nwanyị n'alụghị di.
Onye na-agbachitere na-aghota na ịma mma na-agụnye ịgbachitere n'ụzọ nke ụzọ. Dị ka o siri dị, o lekwasịrị anya na ime ka nka ya zuo oke ka ọ na -echekwa ohere ndị ịgba bọl dị elu na-enye.
Single Dan-Axel Zagadou nwere ike iji enyi nwanyị nwee ụdị ezumike a. N't gaghị ekweta ?. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Gafere ịrị elu dị ịtụnanya nke Dan-Axel na ikike iji chebe onwe ya bụ ezinụlọ na-agba ume. Anyị na-ewetara gị eziokwu gbasara ndụ ezinụlọ nke ndị na-agbachitere ya.
Mama na nna Dan-Axel bụ ndị hụrụ egwuregwu n'anya bụ ndị rụrụ ọrụ nkwado na ndụ na ebili nke onye na-agbachitere ya. Onyinye kasịnụ ha nye ya bụ isi na Ivory Coast kwaga France ogologo oge tupu amụọ ya.
Nke a bụ n'ihi na France nyere ndị na-agbachitere ohere dị ukwuu karịa ala nke ezinụlọ ya. Agbanyeghị na a hụbeghị nne na nna a ka ha na-azọ onye na-agbachitere ya na steeti ndị dị na Germany, ọ gaghị adị anya tupu ha eme nke a iji mata ihe dị egwu ọ na-enweta na European football.
Dan-Axel nwere ụmụnne nwoke anọ nke ndị amabeghị banyere ha. Ha gụnyere Dressy na Yohan. Yohan bụ nwanne nke okenye nke bi na Dan-Axel na Germany ma hụ na ọ nweghị mgbe ọ na-elekwasị anya. N'aka nke ya, Dressy bụkwa nwanne nwoke nke okenye nke ntinye egwu na mmalite nke football mere ka Dan-Axel nakweere egwuregwu ahụ dị ka egwuregwu nwata.
Dan-Axel na nwanne ya nwoke nke okenye na onye nlekọta bụ Yohan. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Dressy na-egwuri egwu na nọmba nke abụọ na-agbachitere ikike na Santa atọ nke atọ Santa Club na ọ bụ ya mere Dan-Axel họọrọ iyi nọmba 2. Agbanyeghị na ekwuteghị okwu gbasara nwanne nwanyị Dan-Axel ma anyị nwere olile anya na ọ nwere otu nwanna nwanyị ọkachasị mgbe ọ gụchara foto dị n'okpuru.
Dan-Axel nwere ndị ezi na-ụlọ. Ebe E Si Nweta Foto: WTFoot.
Apụghị site na Dan-Axel na ezinụlọ ebilite, amabeghị ọtụtụ ihe banyere usoro ọmụmụ ya na usoro ezinụlọ ọkachasị dịka o metụtara nne na nna ya na nna nna ya. N'otu aka ahụ, enweghị ndekọ banyere nwanne nna nna ya, nwanne nna ya, na ụmụ nwanne nne ya ebe ụmụ nwoke na ụmụ nwanne ya amabeghị.
Know mara ịmara Dan-Axel nke nwere ụdị agwa dị mma nke gụnyere ọgụgụ isi, ilekwasị anya na ịdị umeala n'obi? Na mgbakwunye, ọ maara otu esi ejikọ ndị mmadụ ma nwee onyinye nke igosipụta onwe ya.
Onye na-agbachitere egwu dị egwu nke ihe ịrịba ama Zodiac bụ Gemini adịkarịghị ekpughere nkọwa gbasara ndụ onwe ya na nke onwe ya, ebe ihe omume ndị mejupụtara ọdịmma ya na ntụrụndụ gụnyere ikiri ihe nkiri, ige egwu, ịzụ ahịa na iso ezinụlọ ya na ndị enyi ya nwee oge dị mma.
Dan-Axel nwere mmasị n'ịzụ ahịa. Lee foto nke ya na enyi ya ka ọ na-egosi omume. Ebe E Si Nweta Foto: WTFoot.
Banyere etu Dan-Axel Zagadou si na-eme ma na-emefu ego ya, ọ nwere ọnụ ahịa ruru $ 455,460 na ide akwụkwọ ndụ a. Ribtụnye iyi ka ndị na-agbachitere ọnụ ahịa bara uru gụnyere ụgwọ ọnwa na ụgwọ ọrụ ọ na-enweta maka ịgba bọọlụ nke mbụ.
Na mgbakwunye, nkwenye na ụdị dịka Adidas na-eme ọtụtụ ihe iji bulie akụ na ụba ya. N'ihi ya, Dan-Axel na-eto eto abụghị ihe ụtọ dị na ndụ nke na-agụnye iji ụgbọ ala ndị dị oke ọnụ gụnyere ndị merụsịrị emerụ ahụ gụnyere ibi n'ụlọ na ọnụ ụlọ dị oke ọnụ.
Lee onye agbachitere na-atụ maka ịgba n'ime obere ụgbọ ala Mercedes gbamgbam. Ebe E Si Nweta Foto: WTFoot.
Iji mechie ngwụcha akụkọ banyere nwata anyị Dan-Axel Zagadou ebe a bụ obere ihe ama ama ma ọ bụ akụkọ a na-akọwaghị banyere onye na-agbachitere ya.
Eziokwu # 1 - Banyere mbido ụgwọ ọnwa ya:
Kemgbe ọ batara n'ọnọdụ egwuregwu klọb, enwere mmasị na ego Dan-Alex Zagadou na-enweta. Eziokwu bụ, tya onye France na nkwekọrịta ya na Borussia Dortmund na-ahụ ka ọ na-etinye ụgwọ dị ala nke gburugburu € 234,000 euro kwa afọ. Na-echipịa nke ahụ n'ọnụ ọgụgụ pere mpe, anyị nwere ụgwọ ndị na-eso otu afọ, ọnwa, ụbọchị, awa, nkeji na sekọnd (dị ka n'oge edere).
A na-enweta ego na poundling (£)
Kwa Afọ € 234,000 £ 200,000 $ 263,743.74
kwa ọnwa € 19,500 £ 16,666.6 $ 21,978.6
Kwa Izu € 4,500 £ 3,846.15 $ 5,494.7
Kwa .bọchị € 641.10 £ 547.94 $ 784.96
Kwa elekere € 26.71 £ 22.83 $ 32.70
Kwa Nkeji € 0.45 £ 0.38 $ 0.54
Sekọnd € 0.01 £ 0.01 $ 0.009
Nke a bụ ego Dan-Axel Zagadou rụgotara kemgbe ị bidoro ilele Peeji a.
Ọ bụrụ na ihe ị hụrụ n’elu na-agụ (0), ọ pụtara na ị na-elele ibe AMP. ugbu a Pịa EBE A ịhụ ụgwọ ọrụ ya na-abawanye na sekọnd. Ị maara?… Nwoke toro eto na France kwesiri ịrụ ọrụ opekata mpe 6.5 ọnwa irite € 19,500, nke bụ ego Dan-Axel Zagadou na-enweta n'otu ọnwa.
Eziokwu # 2 - Religion:
Ndị nne na nna Dan-Axel Zagadou zụlitere ya na nkwenye nkwenkwe okpukpe Ndị Kraịst. Trus bụ, ọ bụ onye Kraịst ma na-ekpe ekpere na nke ahụ. Otu mgbe ọ kwuru na N'ajụjụ ọnụ na otu n'ime nkwenkwe ụgha ya gụnyere ịgụ Akwụkwọ Nsọ na ikpe ekpere tupu mmalite egwuregwu.
Dan-Axel nwere ọkwa FIFA dị elu na isi 79. Ngosiputa kwesiri ekwesi bu ihe ngosi nke na-aga n’ihu n’iru ka o siri bia n’egwuregwu. Ọ na-egosikwa na ọ ga-abụ naanị oge tupu onye na-agbachitere enweta ogo ya ruru 86.
Ogo ya bụ ihe ziri ezi yana atụmanya maka mmụba meteoric site n'oge. Ebe E Si Nweta Foto: SoFIFA.
Eziokwu # 4 - Okingụ sịga na ị drinkingụ ihe ọ drinkingụ :ụ:
Dan-Axel anaghị a smokeụ sịga, ike ejideghị ya mgbe ọ na-a drinkingụbiga mmanya ókè. Nke a na-egosi na eziokwu ahụ bụ na onye na-ahụ maka egwuregwu bọọlụ maara otu esi ede onwe ya n'ụdị ọkachamara ọ gaghị etinye aka ọ bụla na-emetụta ahụ ike ya.
Eziokwu # 5 - Ogbugbu:
Dan-Axel enweghị egbugbu ma ọ bụ nka n'ahụ n'oge ede. Ya onwe ya ka n’enwe ezi aru nke gha n’iru n’iru ya n’ogologo idi elu 6, 5 inch.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ gbasara ụmụaka-Danel Axel Zagadou Plus Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe adịghị mma, biko kesaa ya nye anyị site na ịza ajụjụ n’okpuru. Anyị ga-eji echiche gị niile kwanyere ma kwanyere ùgwù ùgwù.
Nwere ike 14, 2017